Ingabe i-AliExpress Legit? Ukubuyekezwa Okuningiliziwe - Buyekeza
Ingabe i-AliExpress Legit? Ukubuyekezwa Okuningiliziwe
I-AliExpress isitolo esiku-inthanethi lapho ungathenga khona imikhiqizo ngamanani ashibhile kakhulu kunezinye izinsizakalo ezifanayo. Lesi sitolo esiku-inthanethi sasungulwa cishe ngonyaka we-2010 futhi singesakwa-Alibaba, okuyinkampani enkulu yezizwe ngezizwe yaseChina egxile kwi-e-commerce.
Iningi lemikhiqizo lisemthethweni, noma kungahle kube nokulinganiselwa okuthile. Ungagxuma kalula ekhasini lokuqala noma elishibhile lomthengisi olitholayo futhi ungalindela imikhiqizo esezingeni eliphakeme evela kokufanayo. Kukhona ukukhethwa kwemikhiqizo ethile emangazayo futhi engabizi ongayithola.
Akuwona neze umhlinzeki wesevisi wokukhwabanisa abanye abantu abacabanga kanjalo. Eminye imikhiqizo yamaShayina efana neHuawei, Xiaomi, neBaseus ifake nemikhiqizo yayo kulesi sitolo esiku-inthanethi, kanye namakhulu nezinkulungwane zamanye amabhizinisi amancane.
Amaqiniso Athandekayo Ongawathanda:
Izibalo zeWhatsapp namaqiniso
Izibalo ze-Instagram (2020)
Ngabe i-AliExpress isebenza kanjani ngokujwayelekile?
I-AliExpress isebenza njenganoma yiziphi ezinye izitolo eziku-inthanethi lapho uvame ukusesha umkhiqizo othile, futhi iwebhusayithi izokubonisa izinketho ezitholakalayo kubathengisi abaningi.Uyabona ukuthi iningi lemikhiqizo ihlukaniswe ngezigaba ezahlukahlukene njengezimpahla zemidlalo, okokugqoka, ubuhle nempilo, i-electronics yabathengi, ubucwebe, nokunye okuningi.
Lesi sitolo esiku-inthanethi sithumela yonke indawo futhi ungakhokha ngezindlela eziningi zokukhokha zomhlaba ezinjengekhadi lesikweletu noma ledebhithi, i-PayPal, ukudluliswa kwebhange, iPioneer, njll.Ukuze usebenzise i-AliExpress, okokuqala kuzodingeka ubhalisele i-akhawunti yamahhala kuwebhusayithi esemthethweni ye-AliExpress.
Ungamane wenze i-akhawunti entsha ngokufaka ikheli lakho le-imeyili ngendlela yokubhalisa, noma ungangena ngemvume nge-akhawunti yakho ye-Facebook noma ye-Google.Ngemuva kokudala i-akhawunti yakho, i-AliExpress izokubuza igama lakho nesibongo, usuku lwakho lokuzalwa, ubulili bakho, ubuzwe bakho, nezinye izinto ezimbalwa ongazithola uma usanda kudala i-akhawunti.
Ubani Ongasebenzisa I-AliExpress?
Noma ngubani kusuka noma yikuphi emhlabeni angasebenzisa i-AliExpress njengoba ivulekile kubo bonke abasebenzisi. Ibuye inikeze ngezilimi ezahlukahlukene zewebhusayithi yayo kanye nohlelo lokusebenza lwe-smartphone njengesiNgisi, isiDashi, isiJalimane, isiRashiya, iSpanish, isiPutukezi, isiFulentshi, isiTurkey, isiNtaliyane, isiJapane, isiThai, isiKorea, isiVietnam, isiHeberu, isi-Arabhu nesiPolish.
Yiziphi Izinto Ozokwazi Ukuzithenga Ku-AliExpress?
Ungathola izinto ezahlukahlukene ku-AliExpress kusuka kwimfashini yamadoda nabesifazane, i-elekthronikhi kuya kwimikhiqizo yezinwele nobuhle, ifenisha, ubucwebe, izithuthuthu, kanye nezimoto.
Kungani Zonke Izinto Zishibhile Ku-AliExpress?
Iningi labathengisi abathengisa imikhiqizo yabo ku-AliExpress bazinze eChina futhi bathola yonke imikhiqizo yabo ngqo kubakhiqizi abathile baseChina. Lokhu kugcina izindleko ziphansi futhi lokho kusho ukuthi bangahlinzeka ngemikhumbi yamahhala noma eshibhile kakhulu ngokungafani nezinye izitolo eziku-inthanethi.
Ngabe Kuphephile Ukuthenga Ku-AliExpress?
Lapho usudale i-akhawunti ku-AliExpress, nakanjani uzoqala upheqa izinto ku-AliExpress. Uzothola ukuthi zonke izinto zishibhile kule webhusayithi futhi lokho kungaphakamisa imibuzo kanye nokungabaza phakathi kwabantu. Ingabe iningi labantu liyazibuza ukuthi kuphephile yini ukuthenga imikhiqizo ku-AliExpress?
Ukukhuluma iqiniso, i-AliExpress ngokuphelele iyipulatifomu ephephile futhi esemthethweni yokuthenga imikhiqizo kuyo. Lapho usuzothenga into kulesi sitolo esiku-inthanethi, uzoba nezinketho ezimbalwa zokuxhumana nomthengisi, uthole inombolo yokulandelela, ulandele imikhiqizo yakho, bese ungathola imbuyiselo ephelele ngezinto ezifika zilimele, sekwedlule isikhathi, noma ungafiki.
Kepha, lapho uthenga ku-AliExpress udinga ukuthi uhlakaniphe kancane. Esinye sezizathu esenza ukuthi imikhiqizo abayithengisayo ishibhile yingoba uthenga ngqo kumenzi, kodwa kunesinye isizathu okungukuthi ezinye zezinto zingamanga.
Ukugwema leyo mikhiqizo yomgunyathi, udinga ukuqinisekisa ukuthi uhlola ukubuyekezwa kwemikhiqizo evela kwabanye abathengi futhi uphinde uhlole isilinganiso somthengisi kuwebhusayithi ngaphambi kokuthenga okuthile ku-AliExpress.
Yini Ongayilindela Uma Usebenzisa i-AliExpress?
Imininingwane Yekheli Nenkokhelo:
I-AliExpress izodinga ukuthi ungeze ikheli lakho nemininingwane yokukhokha ngesikhathi sesigaba sokuphuma se-oda lakho lokuqala. Uma usuyifakile imininingwane, izogcinwa ku-akhawunti yakho ukuze isetshenziswe lapho wenza noma yiluphi uhlobo lwe-oda. Ngokungafani nezinye izitolo ezikucela ukuthi ungeze ikheli lokuthumela kanye nendlela yokukhokha kuphrofayela yakho lapho usetha i-akhawunti yakho.
Izindawo Ezilahlekile kusuka kumenyu:Amanye amadolobha kungenzeka alahlekile kwimenyu lapho uzama ukufaka ikheli lakho ku-AliExpress, kepha uzokwazi ukufaka ngesandla igama ledolobha enkambini yombhalo.
Amanani ashibhile:Uma uthenga ku-AliExpress, ungalindela ukuthi imikhiqizo ibe ngamanani ashibhile kakhulu kunalokho obekuvame ukuba kwezinye izitolo eziku-inthanethi.
Yebo, ukuthenga ku-AliExpress kuphephile futhi kusemthethweni. Noma-ke, bekungeke kube ngesinye sezitolo ezivakashelwa kakhulu ku-inthanethi emhlabeni wonke nezigidi zabasebenzisi nsuku zonke.Isitolo esiku-inthanethi sicubungula ngempumelelo amakhulu nezinkulungwane zama-oda nsuku zonke, siwathumela kuwo wonke umhlaba.
Ukuvikelwa kusetshenziswa ngokuzenzakalela kubo bonke abasebenzisi bale webhusayithi. Yebo, njengomthengi, ngeke uze udinge ukwenza noma yini eyengeziwe. Uma uthenga imikhiqizo ngqo nge-AliExpress, imikhiqizo yakho izovikelwa noma ngabe uthenga ini esitolo se-inthanethi.
Lesi sitolo silandela imodeli ejwayelekile ye-e-commerce. Lapho usuzothenga into ethile kusevisi, uzothola inombolo yokulandela ngomkhondo, ungalandelela imikhiqizo yakho, futhi uthole nenketho lapho uzokwazi khona ukubuyiselwa imali egcwele uma izinto zifike zonakele, noma sekwephuzile , noma uma izinto zingafiki nhlobo.I-Alibaba Group iyinkampani yabazali yayo engemuva kwensizakalo yezokuphepha ye-Alibaba Cloud.
Gcina engqondweni yakho ukuthi noma zingakusiza ukuthi ugcine imali nomzamo, kunamawebhusayithi afana ne-AliExpress avame ukuphakamisa ukukhathazeka kokuphepha phakathi kwabathengi. Sizwile ukuthi imikhiqizo eyenziwe eChina, iyonke, inedumela lekhwalithi engeyinhle. Noma kunjalo, akulona iqiniso kuzo zonke izimo. Ungathola ngisho nento eyenziwe kahle ngamanani ashibhile kunokujwayelekile.
Ngabe iBluestacks iphephile ukusebenzisa ku Windows 10?
Imibukiso Engcono Kakhulu ye-Anime ku-Netflix
Iwebhusayithi Entsha Ye-123Movies - Ingabe Lokhu Kuphephile Ukubuka Ama-Movie?
faka i-alexa kumawindi 10
usuku lokukhishwa kwabadlali abaningi besibhakabhaka
ikhadi lesipho le-amazon 500 dollar
hulu..com / activate
I-tv show online iziqephu ezigcwele ezigcwele
I-super mario flash 2 ivuliwe esikoleni